တက္ကစီမောင်းသူတဦး ဓားဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » တက္ကစီမောင်းသူတဦး ဓားဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံး
တက္ကစီမောင်းသူတဦး ဓားဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံး
Posted by Bayote on Jun 11, 2010 in Myanma News, News | 11 comments
ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ် ဒဂုံမြို့သစ် တောင်မြောက်လမ်းဆုံအနီးတွင် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန် (၆) ရက်ည၌ တက္ကစီမောင်းသူတဦးကို ကြေးစားလူသတ်သမားများက သတ်ဖြတ်မှုတခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
သေဆုံးသူသည် အသက် (၃၇) နှစ်အရွယ် ကိုလှဝင်းဆိုသူဖြစ်ပြီး ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ် (၇၁) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး မွတ်စလင်လူမျိုးဖြစ်ကာ ဇနီးနှင့်အတူ သားသမီး (၅) ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သေမှုသေခင်းဖြစ်စဉ်ကို သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည့် နယ်မြေရဲတဦးက “လှဝင်းကားကို ကားတစီးက လာပြီးတော့ ပွတ်ဆွဲတယ်။ သူက စက်ရပ်ပြီးတော့ ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်တယ်၊ ကားပေါ်မှာ ခရီးသည် (၂) ယောက်ပါတယ်၊ အဲဒီ ခရီးသည်တွေလည်း ကြောက်လန့်ပြီးတော့ နောက်ကား ငှားပြီးတော့ ပြေးရော၊ ဖိနပ်တောင် ကျန်ခဲ့သေးတယ်။ လူသတ်သမားတွေက သူ့ကို ဓားနဲ့ထိုးတော့ သူကားပေါ်ကို အော်ဟစ်ပြီး ပြန်ပြေးတယ်။ လူသတ်သမားတွေက သေသူရဲ့ခြေထောက်ကို ဓားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ ခုတ်တယ်။ သူက ကားပေါ်ကို ပြေးတက်ပြီးတော့ ကားမှန်တွေကို ပိတ်ပြီးတော့ ပြေးမလို့ လုပ်ပေမယ့် အောက်မှာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်တုန်းမှာ ခါးမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ကားသော့က ကျကျန်ခဲ့တယ်။ သူ့ကို လူသတ်သမားတွေက ကားမှန်ကို ခွဲပြီးတော့ မသေမချင်း သတ်တာလို့ ယူဆရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့မှာ ရထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကိုရော အခြေအနေကိုရော တွက်ဆကြည့်မိလို့ပါ။ ကားသော့က ကားနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ တွေ့ရတယ်။ ညာဘက်လက်မှာလည်း ဓားနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာ ခုတ်ထားတာ တွေ့ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
သေဆုံးသူနှင့်တက္ကစီမောင်းဘက်တဦးက “အဲဒီနေ့က လှဝင်း မောင်းတဲ့ကားက တောင်မြောက်လမ်းဆုံ မရောက်ခင် တံတားဖြူ အနီးမှာ ဖြစ်တာ။ သူ့အလောင်းကို ကျနော်တို့သွားကြည့်တော့ လက်တွေမှာ ဓားနဲ့ခုတ်ထားတာတွေက အများကြီး၊ ကြေမွနေတယ်။ ပြီးတော့ လက်မလည်း ပြတ်နေတယ်။ ဗိုက်ကိုလည်း ဓားနှင့်ခွဲသွားတော့ အူတွေပါထွက်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ် ရဲစခန်းက စုံစမ်းကာ လူသတ်တရားခံများကို ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့၌ ဖမ်းဆီးမိပြီဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတဦးက ပြောသည်။
“တရားခံတွေကို မိထားပါပြီ၊ အမှုကိုတော့ စစ်ဆေးနေတုန်းပါပဲ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
လူသတ်သမားများသည် တောင်းအေ့ (စ်) ကားဖြင့် လိုက်သတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သေဆုံးသူ ကိုလှဝင်းထံမှ ငွေကြေး တစ်စုံတရာ ယူဆောင်သွားခြင်းမရှိကြောင်း၊ ယင်းအတွက် သေစေလိုသော စိတ်သက်သက်ဖြင့် သတ်ဖြတ်သည်မှာ ထင်ရှားကြောင်း ဒေသခံ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “အခု သတ်တဲ့သူတွေကို ဖမ်းထားတာ၊ ယာဉ်မောင်း အပါအ၀င် လူ (၄) ဦး ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလူတွေက ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်အတွင်းက ကြေးစားလူသတ်သမားတွေပဲ” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားမှုသည့်အချိန်မှာ ဇွန် (၆) ရက် ည (၇) နာရီခွဲကျော်ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာတို့မှ လာရောက်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ကြသည်မှာ ည (၉) နာရီခန့်တွင် ဖြစ်ကြောင်း အခင်းဖြစ်ပွားရာအနီးမှ မျက်မြင်များက ပြောသည်။
မျက်မြင်များ၏ ပြောပြချက်အရ ထိုသို့အခင်ဖြစ်ပွားစဉ်တွင် ကိုလှဝင်းက အော်ဟစ်အကူ အညီတောင်းသော်လည်း မိမိတို့ကိုပါ သတ်သွားမည် စိုးရိမ်သည့်အတွက် သွားရောက် မကူညီနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Source : Khit Pyaing
when i read , i so afraid. i think taxi driver has any problem with other.
ကြောက်စရာကြီး ဆေးကြောင်နေတဲ့လူတွေလားမသိ၊ အခုနောက်ပိုင်းမှုခင်းတွေပိုပေါလာဆိုးလာသလိုပဲ
လုပ်ကြပါဦး ဥပဒေစိုးမိုးရေး တွေ
ရန်ကုန်မှာ လိုင်းကားစီးရင်၊တက္ကစီစီးရင် မကြာမကြာတွေ့မိတာက ကားသမားအချင်းချင်း ဆဲကြဆိုကြ၊ တစ်ခါတစ်လေ ကားပေါ်ကဂျမ်းတုံးဆွဲပြီး ရိုက်တော့နှက်တော့မလိုပြေးဆင်းသွားကြနဲ့။ တစ်ကယ်ဖြစ်တာတော့တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးပေမယ့် တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ တစ်ကယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ အသိသာကြီးပါ။ Post ထဲမှာပါတဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ သိပ်ဘ၀င်မကျမိပါ။
ကြေးစားလူသတ်သမားဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်။ ကြည့်မြင်တိုင်က ဆိုတော့ ပိုသေချာသွားတယ်။ အဲဒီ ကမ်းနားဘက် က စရိုက်တွေပဲ ။ စိုးမြင့် ဆိုတာလဲ နာမည်ကြီး လူမိုက်တစ်ယောက်ပဲ ။ အခုတော့သေသွားပါပြီ ။
လူသားအချင်းချင်းမစာနာကြပါတော့လားနော် ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုတာ တကယ်များဖြစ်နေပြီလား လူတွေအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်နေကြပြီလေ
ကြက်သီးတောင်ထတယ် ဖတ်ရတာ … ။
လူ့အသက်ကို ကြက်ကလေး ငှက်ကလေး သတ်သလို သတ်နေလိုက်ကြတာ
သေတဲ့သူမှာ တစ်ခြား ပြသနာ ရှိမယ်ထင်တယ်၊ ကြေးစားငှားပြီး သတ်ရလောက်အောင် ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတော့လေ…